ရေချိုးခန်းထဲမှာ အဝတ်လျှော်စက် - အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ | Bezzia
Susana godoy | 23/06/2022 14:00 | ဆင်ယင်မွမ်းမံခြင်း
ရေချိုးခန်းရှိ အဝတ်လျှော်စက်သည် ကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်ထက် ပို၍အဖြစ်များနိုင်ပါသည်။. မီးဖိုချောင်မှာ ဒါမှမဟုတ် နောက်ထပ်နေရာတစ်ခုမှာ လူတော်တော်များများရှိနေတာ မှန်ပေမယ့် အိမ်တစ်အိမ်မှာ နေရာအများကြီးမတွေ့ရပါဘူး။ ထို့ကြောင့်၊ ရေချိုးခန်းထဲတွင် အဝတ်လျှော်စက်ကို ထားရန် ဆုံးဖြတ်ရသည့် ကိစ္စများစွာရှိသည်။
ဖြစ်ကောင်း ပထမဆုံး တွေးရမယ့်အချက်ကတော့ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ကိစ္စပါ။ဒါပေမယ့် ပညာရှင်တစ်ယောက်ကို ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တော့ ကြောက်စရာမရှိပါဘူး။ တူညီသောဒင်္ဂါးပြား၏ နှစ်ဖက်စလုံးကို အမြဲတွေ့လေ့ရှိသောကြောင့် ၎င်းတွင် အားသာချက်များသာမက ၎င်း၏ အားနည်းချက်များကိုလည်း ယခုကျွန်ုပ်တို့ မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
1 ရေချိုးခန်းထဲမှာ အဝတ်လျှော်စက်ရှိခြင်းရဲ့ အားသာချက်များ
ရေချိုးခန်းထဲမှာ အဝတ်လျှော်စက်ရှိခြင်းရဲ့ အားသာချက်များ
အဝတ်လျှော်စက်သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အသုံးအဆောင်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ ၎င်းသည် အများအားဖြင့်ရှိသော အရွယ်အစားများနှင့် ယေဘုယျအားဖြင့် ကြမ်းပြင်၏ မီတာအနည်းငယ်သာရှိသောကြောင့် ၎င်းကို မည်သည့်နေရာတွင်ထားရမည်ကို သိရန် အနည်းငယ် ခေါင်းကိုက်စေနိုင်သည်။ ရေချိုးခန်းထဲမှာ အဝတ်လျှော်စက်တစ်လုံးရှိဖို့ စိတ်ကူးက သင့်အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အကြံအစည်တစ်ခုလို့ ထင်ရတယ်ဆိုရင်၊ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင့်ကို နည်းနည်းလေး ပိုယုံကြည်လာစေဖို့ သူ့ရဲ့ အားသာချက်တွေကို ထားခဲ့လိုက်ပါ။
သုံးတဲ့အခါ ပိုသက်သာတယ်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယုတ္တိနည်းအရအားဖြင့် အဝတ်များသည် ပုံးများ သို့မဟုတ် တစ်အိမ်လုံးသို့သွားစရာမလိုဘဲ ၎င်းထံသို့ တိုက်ရိုက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ရေချိုးခန်းကြမ်းပြင်ပေါ် ပစ်ချလိုက်တဲ့ ညစ်ပတ်တဲ့အဝတ်အစားတွေ အမှိုက်ပုံတွေ ကျန်ရစ်နေလိမ့်မယ်။ ယခုအချိန်မှစ၍ မှန်ကန်သောနေရာတွင် မထားရခြင်းအတွက် အကြောင်းပြချက်များ ရှိမည်မဟုတ်ပေ။
မီးဖိုချောင်မှာ အဝတ်လျှော်စက်ရှိရင်၊ ယခု သင့်တွင် နေရာပိုရလိမ့်မည်။ သူမ၌။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မီးဖိုချောင်တွင် နာရီပေါင်းများစွာ သုံးစွဲရသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သောကြောင့် နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို လုပ်ဆောင်ရန် နေရာအချို့ရှိရန် အမြဲလိုအပ်ပါသည်။ အဝတ်လျှော်စက်၏အပေါက်သည် သင့်အား ဗီရိုတစ်ခုထားရှိရန် အမြဲကူညီပေးနိုင်ပြီး သိုလှောင်ရန် အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပါစေ။
ထပ်မံတပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရေချိုးခန်းထဲတွင် ပါဝါပလပ်ပေါက်နှင့် ရေထွက်ပေါက် နှစ်ခုစလုံး ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်း၏နေရာချထားမှုသည် မည်သည့်ပြဿနာ သို့မဟုတ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမျိုးကိုမဆို မဆိုလိုပါ။
လူများစွာအတွက် ဆူညံသံသည် အဆိုးရွားဆုံး ပြဿနာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။. တစ်ခါတစ်ရံတွင် ရေချိုးခန်းများသည် အိမ်တွင်း၌သာရှိပြီး အသံပို၍ အသံထွက်နိုင်သောကြောင့်၊ ဤအတွက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခင်ကထက် အနည်းငယ် ဆူညံသံ အနည်းငယ်နိမ့်သော အဝတ်လျှော်စက်များလည်း ရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သိထားပြီးဖြစ်သည်။
ရေချိုးခန်းထဲမှာ နေရာလွတ် မီးဖိုချောင်ဧရိယာတွင် ဖြတ်တောက်ခြင်းကဲ့သို့ပင် ပြဿနာရှိနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ရင် ပိုကျစ်လျစ်တဲ့ အဝတ်လျှော်စက်ကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
ဗေဒအချက် လူများစွာအတွက် ဆုတ်ယုတ်မှုတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ ရေချိုးခန်းထဲမှာ အဝတ်လျှော်စက်ရှိတာက ကျန်တဲ့အလှဆင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ အမြဲလိုက်ဖက်အောင် မပြုလုပ်နိုင်တာ အမှန်ပါပဲ။ အကြိမ်များစွာ ကတည်းက အတန်ငယ် ခိုင်းစေခဲ့သည်။
သေချာပါတယ်၊ စက်ပစ္စည်းက မြင်လိုက်ရတဲ့ ရလဒ်ကို မကြိုက်ဘူးဆိုရင် အဲဒါကို ဖုံးကွယ်နိုင်တဲ့ စိတ်ကူးတွေ အများကြီးရှိနေတယ်လို့ ဆိုရမှာပေါ့။ အမျှ ဒေါင်လိုက်တံခါးများဖြင့် ဗီရိုတစ်မျိုးကို ထားရှိပါ။ သူတို့ထဲက တစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်တယ်။ ထို့ကြောင့် အောက်တွင် အဝတ်လျှော်စက်နှင့် အဝတ်လျှော်ပစ္စည်းများအပြင် ခြင်းတောင်းများစွာ သို့မဟုတ် သင်လိုအပ်သမျှကို သိမ်းဆည်းရန် စင်များပေါ်တွင် အများအပြားရှိသည်။ ယင်းအတွက် သင်သည် ရေချိုးခန်း၏ ထောင့်တစ်ခုအဖြစ် လိုအပ်ပြီး ၎င်းသည် အဝတ်လျှော်စက်၏ အကျယ်ထက် အနည်းငယ်ပိုပါသည်။ ပရိဘောဂတွေရဲ့ အရောင်ကို ကျန်တဲ့အခန်းနဲ့ လိုက်ဖက်အောင် လုပ်နိုင်တာမို့ ဒီလိုအခန်းမျိုးမှာ သဟဇာတဖြစ်အောင် လုပ်ပါ။ အဲဒါက အကြံကောင်းတစ်ခုလို မဟုတ်ဘူးလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ဆင်ယင်မွမ်းမံခြင်း » ရေချိုးခန်းအတွင်းရှိအဝတ်လျှော်စက်: အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ
သတို့သမီးနဲ့ သတို့သားအတွက် မင်္ဂလာလက်ဆောင်